လူထက်လွန်လူသား အတွက် မွှေးနေ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာ မနက်ဖြန်မွေးနေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူထက်လွန်လူသား အတွက် မွှေးနေ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာ မနက်ဖြန်မွေးနေ့
လူထက်လွန်လူသား အတွက် မွှေးနေ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာ မနက်ဖြန်မွေးနေ့
Posted by Sonny on Jun 18, 2012 in Creative Writing, Poetry | 31 comments
အမေစုမွေးနေ့လက်ဆောင်ကဗျာ 19th June 2012
လိုအပ်ရင် သား ရဲ့
အမေစု သက် ကျော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
Sonny Min Naing has written 42 post in this Website..
A freelance English Teacher, fond of reading and writing poems.
အန်တီ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ ကျန်းမာရွင်လန်းပါစေ။
အမေ သားတစ်ယောက်တိုး သွားပီပေါ့ …
အမေစု သား ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း မမှီနိုင်လောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
သူ့သားဖြစ်ဖို့ကတော့ ကိုဆန်နီ disorganized ဖြစ်တာနဲ့တင် အဆူ ခံ နေရမှာ
အမေစုရဲ့ ၆၇နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အခါသမယမှစလို့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး
သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ….
ဆုတောင်းတိုင်း အမေစု ပြည့်ပါစေသား
မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ ချစ်သူခင်သူတွေက နှစ်တွေ လတွေ ပေးလို့ရသလားလို့
တရားဟောတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကမေးတော့ ကျမ ရယ်မိတယ်။
မရနှိုင်တာ။ မေးစရာမဟုတ်ပါရက်နဲ့လို့လေ။ ဘုန်းကြီးကတော့ သူများဘာမှလုပ်ပေးလို့
မရဘူး၊ ကိုယ်ကျင့်မှ ကိုယ်အားထုတ်မှ ဆိုတဲ့ သဘောတရားပြောပြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ SUU ကို နိုဘယ်ဆုယူဖို့ သွားလှုပ်ရှားဟောပြောနေပုံတွေ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပုံလေးတွေ မြင်ရတော့ သားကိုပြောမိတယ်။
” SUU ကို နောက်ထပ် ၁ဝနှစ်လောက် ငယ်စေချင်လိုက်တာကွယ်။ အမေ့သက်တမ်းထဲက
(၁ဝ)နှစ်လောက်ပေးလို့ရရင် ပေးလိုက်စမ်းချင်တယ်၊ အမေ အသက်(၇ဝ) ကျော်သွားလည်း
နေရသလောက်ပဲနေမယ်ကွာ၊ ရပါတယ်” လို့။
တရားနာတုန်းက ဘုန်းကြီးပြောတာကို ရယ်မိတဲ့ကျမ
ကဗျာလှလှလေးစပ်ပေးတဲ့ ကိုဆန်နီရေ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
THANK U FOR ALL THE THOUGHTS YOU SHARED.
အွန်လိုင်းမှာ ပို့ စ်ကဒ်လေးတွေ တင်ထားကြတာတော့ တွေ့ မိသဗျာ..
အန်တီစု သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေခင်ဗျား..
အမေစု မွေးနေ့အတွက် ရွာက ပန်းချီဆွဲတတ်သူများက ပန်းချီ ၊ ကဗျာ ဆရာ/မ များက ကဗျာများ ။ ကာတွန်း နဲ့ ဓါတ်ပုံ ဆရာ/မ များ ကလည်း ကိုယ်ပိုင်ရာသန်ရာလေးတွေ သူကြီးဆီ ၀ိုင်းပို့ပြီး ရွာ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း အနေနဲ့ သူကြီးက ပိုစ်တင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမှာ။
လေဘဲ ရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ လေတိုက်လိုက်ပြီ ကှိုဗိုက်ရေ ..
အကြီးကြည့်ချင်ရင် Credit ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်တွေကိုသွားကြည့်ပါနော..
source link : http://www.dawnmanhon.com/2012/06/blog-post_19.html
Source link: http://www.ngunngemoe.net/2012/06/blog-post_7871.html
Source Link : http://moemaka.blogspot.com/2012/06/min-kyaw-khine-suu-67.html
ွှ့Thank u watermelon
လူထက်လွန် လူသား ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေး ဖတ်ပြီး ထိုက်တန်စွာ ခေါ်ဆိုတယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။
ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကတော့ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒလေးကို ဖော်ထုတ်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။
တကယ့် superwoman ပါ နော်
တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုတဲ့ စေတနာတွေ
အမေစု မှာ အပြည့်ရှိပါတယ်
တကယ်ဆို အရွယ် အရ..ပင်ပန်းရှာမယ်ထင်ပါတယ်
အေးလေ…အမေစု အတွက် ဖေးကူကြရင်း ….
အန်တီ အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေဗျာ ။ အဖေ့စကားကိုမြေ၀ယ်မကျနားထောင်ပြီး ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သမီးလိမ်မာလေး … ။ ဗိုလ်ချုပ်က ရခိုင်ကအပြန်မှာ အညာဒေသမှာ စင်ပေါ်တက်ပြီးပြောသွားလိုက်တာ ဘာတဲ့ “ ရခိုင်နဲ့မြွေပွေးအတူတွေ့ရင် ရခိုင်ကိုအရင်သတ်ပါ .. မြွေပွေးကိုနောက်မှသတ်ပါ ´´ တဲ့ .. ။ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေ မျိုးမပြုတ်သေးသရွေ့တော့ ဒုက္ခတွေရင်စီးခံရင်း အမျိုးချစ်ပြလိုက်ဦးမယ်ဗျာ … ။ ရခိုင်လူမျိုးပျောက်တဲ့နေ့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်တံခါးကြီးကျိုးတဲ့နေ့ ၊ အန်တီစုချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အေးချမ်းစွာသူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့ဗျို့ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စွမ်းဆောင်မှုတွေအတွက်လေးစားပါတယ် ။ အနစ်နာခံခဲ့မှုတွေအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ။ကျန်းမာပါစေ ။
လေဒဏ်နေဒဏ် မိုးသက်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ ပြည်သူချစ်သောပန်း ဒေါ်စုအတွက်
ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ပန်းမျိုးစိတ်သစ်ကလေးများတွေ့ခဲ့ရင် ပန်းကလေးနာမည်ကို “စု”လို့ ပေးချင်ပါတယ်။
So the new specie of flower will be
Su Padonmar? Because you will have found out?
အမေစုရဲ့ ယခုနှစ်မွေးနေ့မှသည် အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ။
ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ ။
ပြည်သူတွေ အတွက် ပေးဆပ်ထားသူကို ပြန်ပြီး ပေးဆပ်ထားတဲ့ စာလုံးလေးတွေကို ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ် ကိုဆန်နီ ရှင့်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို/က ချစ်သော ပြည်သူ များရဲ့ ပို့သတဲ့ ဆုတောင်း မေတ္တာ နဲ့ သူမ သည် အသက်ရှည်ရှည် အနာကင်းကင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ စွာ ရှိပါစေ။
သူမ ချစ်သော တိုင်းပြည် နဲ့ ပြည်သူ များ ရဲ့ အနာဂါတ်ကို လှပအောင် သူမရဲ့ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာ နဲ့ ပိုမိုပြီး စိတ်တိုင်းကျ ပျိုးထောင်နိုင်ပါစေ။
လှပတဲ့ ကဗျာလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ :-)
ဟက်ပီ ဘက်ဒေး အမေစု
အမေစု ရဲ့ ၆၇နှစ်မြောက် ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ မှသည်..
လိုအင်ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝပါစေ ။
Let’s wish heravery happy birthday.
အမေစုရေ …..ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ……
အခက်ခဲများစွာကို အလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်မယ့်စိတ်ဓါတ် ၊ မယိုင်မလဲ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ .. အရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်ပါစေ ။ သာယာနွေးထွေးတဲ့ နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ … ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
ကိုဆန်နီရေ .. အမေစုမွေးနေ့ ပို့စ်တင်ပြီး ဂုဏ်ပြုတာ … ကျေးဇူးပါ ။ ၀မ်းလည်းသာမိပါတယ် ။
maung khinmin says: